केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग डीपीआर बनाउन चीन सकारात्मक | Ratopati
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग डीपीआर बनाउन चीन सकारात्मक
personपत्रपत्रिकाबाट exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १२, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्न चीन सरकार सकारात्मक भएको छ ।
प्रस्तावित सो रेलमार्गको निर्माण तथा सञ्चालनबारे दुई मुलुकका पदाधिकारीबीच बिहीबार भएको छलफलमा उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन नेपालले चीन सरकार समक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट सचिव श्रेष्ठका साथै गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा रेल विभागका महानिर्देशकको सहभागिता थियो । चीनका तर्फबाट नेसनल रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेसनका उपप्रशासक आङ लु सीले नेतृत्व गरेका थिए ।
यसअघि नै प्रस्तावित सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक सचिव श्रेष्ठले बैठकमा नेपालले सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको र छिट्टै काम सुरु गर्नेछ भने । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।
मिस नेवा: फागुनमा छानिने
सरकारले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप किन्दैन (भिडियो अन्तरवार्ता)
अभिनेत्री करिश्माको बाबुरामलाई प्रश्न– यहि हो नेपालीले पाएको गणतन्त्र !
फेसबुक म्यासेन्जरमा महिला साथीलाई अश्लील भिडियो र फोटो पठाउने युवक पक्राउ
हल खुल्यो, दर्शक शुन्य !
जापानमा हिमपातसहितको आँधीका कारण १३० कार एक आपसमा ठोक्किए (तस्बिर)
मुख्यमन्त्री डोरमणिविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आज टेबल नहुने